Ukuqinisekiswa kwekhwalithi - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax isungule uchungechunge lwezinqubo zokuphatha nezindlela zokuqinisekisa ukuthi ukulethwa komkhiqizo kuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokwenza wonke umkhiqizo kusuka ekukhetheni abahlinzeki, ukuhlolwa kwe-WIP, nokuhlola okuphumayo kwinsizakalo yamakhasimende. Nazi ezinye zezibonelo:
Ukuhlolwa Nokucwaningwa Kwabahlinzeki bethu
Abahlinzeki kumele bahlolwe ngaphambi kokuvunywa yithimba lokuhlola abaphakeli le-fumax. Ngaphezu kwalokho, i-Fumax Tech izobeka esikalini futhi iklelise wonke umphakeli kanye ngonyaka ukuqinisekisa ukuthi abahlinzeki bahlinzeka ngezinto ezisezingeni ezihlangabezana nezidingo ze-fumax. Ngaphezu kwalokho, iFumax Tech iyaqhubeka ithuthukisa abahlinzeki futhi ibakhuthaze ukuthi bathuthukise ikhwalithi yabo nokuphathwa kwemvelo ngokusekelwe ezinhlelweni ze-ISO9001.
Ngaphambi kokwamukela i-oda, i-Fumax izobuyekeza futhi iqinisekise izidingo zamakhasimende ukuqinisekisa ukuthi i-Fumax inamandla okwanelisa izidingo zamakhasimende kufaka phakathi ukucaciswa, ukulethwa nezinye izidingo.
Ukulungiselela, Ukubuyekeza Nokulawulwa Kokufundiswa Kokukhiqiza
I-Fumax izohlola zonke izidingo ngemuva kokuthola idatha yokwakhiwa kwamakhasimende kanye nedokhumenti ehlobene nayo. Ngemuva kwalokho, shintsha i-datum yokuklama ibe i-datum yokukhiqiza yi-CAM. Ekugcineni, i-MI efaka ukwakheka kwedatha izokwakhiwa ngokuya ngenqubo yangempela yokukhiqiza ye-fumax kanye nobuchwepheshe. I-MI kufanele ibuyekezwe ngemuva kokulungiswa ngonjiniyela abazimele. Ngaphambi kokuthi i-MI ikhishwe, kufanele ibuyekezwe ngonjiniyela be-QA bese ivunywa. Ukubhola kanye nokuqondisa umzila kufanele kuqinisekiswe ngokuhlolwa kwendatshana yokuqala ngaphambi kokukhishwa. Ngamafuphi, iFumax TechTech yenza izindlela zokuqinisekisa ukuthi imibhalo yokukhiqiza ilungile futhi isebenza ngokusemthethweni.
Olungenayo Control IQC
Ku-fumax, zonke izinto kumele ziqinisekiswe futhi zivunyelwe ngaphambi kokuya endlini yokugcina impahla. I-Fumax TechTechestabishes izinqubo eziqinile zokuqinisekisa kanye nemiyalo yokusebenza ukulawula okungenayo. Ngaphezu kwalokho, iFumax TechTechowns amathuluzi nemishini ehlukahlukene yokuhlola ukuqinisekisa ukuthi amandla okwahlulela ngokufanelekile ukuthi ngabe into eqinisekisiwe yinhle noma cha. I-Fumax TechTech isebenzisa uhlelo lwamakhompiyutha ukuphatha izinto, eziqinisekisa ukuthi izinto ezisetshenziswayo zisetshenziswa ngabokuqala. Lapho into eyodwa isondela esikhathini sokuphelelwa yisikhathi, uhlelo luzokhipha isexwayiso, esiqinisekisa ukuthi izinto ezisetshenziswayo zisetshenzisiwe ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi noma ziqinisekiswe ngaphambi kokusetshenziswa.
Inqubo Izilawuli Of Fabrication
Imiyalo yokukhiqiza efanele (i-MI), ukuphathwa kwemishini ephelele nokugcinwa, ukuhlolwa okuqinile kwe-WIP nokuqapha kanye nemiyalo yokusebenza, konke lokhu kwenza yonke inqubo yokukhiqiza ilawulwe ngokuphelele. Imishini eyahlukahlukene yokuhlola efaka phakathi uhlelo lokuhlola lwe-AOI kanye nemiyalo ephelele yokuhlolwa kwe-WIP kanye nohlelo lokulawula, konke lokhu kuqinisekisa ukuthi imikhiqizo eyimikhiqizo kanye nemikhiqizo yokugcina, konke kufinyelela kuzidingo zamakhasimende.
Ukulawulwa Kokugcina Nokuhlolwa
Ku-fumax, wonke ama-PCB kumele adlule esivivinyweni esivulekile nesifushane kanye nokuhlolwa okubukwayo ngemuva kokudlula izivivinyo zomzimba ezihlobene.
I-Fumax TechTechowns imishini yokuhlola esezingeni eliphakeme efaka phakathi ukuhlolwa kwe-AOI, ukuhlolwa kwe-X-ray nokuhlolwa kwe-In-Circuit komhlangano ophelile we-PCB.
Ukucwaningwa kwamabhuku okuphumayo nokuvunywa
I-Fumax TechTechsets yenza umsebenzi okhethekile, i-FQA yokuhlola imikhiqizo ngokuya ngezimfuneko nezidingo zamakhasimende ngokusampula. Imikhiqizo kufanele ivunyelwe ngaphambi kokupakisha. Ngaphambi kokulethwa, i-FQA kufanele ihlolisise konke ukuthunyelwa kwenombolo yengxenye yokuqamba, inombolo yengxenye yekhasimende, ubuningi, ikheli lokuya khona kanye nohlu lokupakisha njll.
I-Fumax TechTechsets up ithimba elihlinzeka ngamakhasimende elisebenzayo ukuze lixhumane kahle namakhasimende futhi libhekane nesikhathi ngempendulo yamakhasimende. Uma kunesidingo, bazobambisana namakhasimende ukuxazulula izinkinga ezihlobene nesayithi lamakhasimende. I-Fumax TechTechis ikhathazeke kakhulu ngezidingo zamakhasimende futhi ihlola njalo amakhasimende ukuthi afunde ngezidingo zawo. Ngemuva kwalokho iFumax TechTechizolungisa ngesikhathi esifanele isevisi yamakhasimende futhi yenze imikhiqizo ihlangabezane nezidingo zamakhasimende
◆ Qedela izinqubo zokukhiqiza zeRoHS
◆ Qedela ukulawulwa kwekhwalithi yenqubo
◆ Ukuqinisekiswa kokulandeleka okungu-100%
◆ Ukuhlolwa kukagesi okungu-100% (amandla nokuhlolwa okufushane)
◆ Ukuhlolwa kokusebenza okungu-100%
◆ Ukuhlolwa kwesoftware okungu-100%
◆ Ukuhlanganisa, ukufaka ilebula nokupakisha amabhodi noma uhlelo ngokuya ngamakhasimende akho izidingo
◆ Singenza ukuhlolwa okusebenzayo kwamabhodi noma uhlelo ngokuya ngemiyalo yokuhlola yekhasimende, futhi singanikeza umbiko wesifinyezo sokuhlola ukusiza amakhasimende ukuthola umthombo wokwehluleka.
◆ Isiqinisekiso sempilo yonke
◆ Indawo yokusebenza ephephile ye-ESD
◆ Ukupakisha nokuthunyelwa okuphephile kwe-ESD
◆ Isitifiketi se-ISO9001: 2008